» दीवाकरको फिल्ममा दीपिकासँग पलको जोडी ?
दीवाकरको फिल्ममा दीपिकासँग पलको जोडी ?
१९ भाद्र २०७६, बिहीबार ०५:५८
म्यूजिक भिडियो हुँदै फिल्ममा प्रवेश गरेका चकलेटी हिरो पल शाहको पछिल्लो रिलिज फिल्म ‘वीर विक्रम २’ बक्सअफिसमा पत्तासाफ भए पनि उनको डिमान्डमा भने कुनै असर परेको छैन । अहिले उनी सुदर्शन थापाको निर्देशनमा फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ मा काम गरिरहेका छन्, जसमा उनको जोडीको रुपमा अभिनेत्री पूजा शर्मा छिन् ।
योसँगै उनको प्रदर्शनको पखाईमा रहेको फिल्म हो, ‘हृदय भरी’ । यसका निर्देशक सुरज सुब्बा ‘नाल्बो’ हुन् । लभर ब्वाईको भूमिकामा निकै रुचाइएका उनलाई राम्रा ब्यानर र मेकर्सबाट फिल्मको प्रस्तावहरु बाक्लै आइरहेका छन् । यसबीच, ‘ऐश्वर्य’, ‘स्टुपिड मन’ र ‘क्याप्टेन’ को क्याप्टेनसिप सम्हालिसकेका निर्देशक दीवाकर भट्टराईको रोजाईमा पनि उनी परेका छन् । उनले पललाई एक फिल्म अफर गरेको खबर बाहिरिएको छ ।
हिले निर्देशक भट्टराई फिल्म ‘तिमीसँगै हुने मन छ’ को तयारीमा छन् । उनी स्वयंले यसको निर्माण गर्दैछन् । अभिनेत्रीको रुपमा श्रीमती दीपिका प्रसाईंलाई फाइनल गरेका छन् । यो फिल्ममा दीपिकासँग अभिनेता आर्यन सिग्देलको जोडी बाँध्ने तयारी रहेको चर्चा चलेको थियो । तर, उनीसँग अर्को फिल्मका लागि कुरा भएको निर्देशक दीवाकरले स्पष्टिकरण दिएका छन् ।